I-WP300B 4-Inch Label Printer
I-WP80B 80mm yeLebhile yePrinta yePrinta
I-WP80B 80mm Thermal Label Printer Uphawu oluphambili • Xhasa ukushicilelwa kweebakhowudi ezininzi
Iphrinta eyi-80mm yeRisithi ye-WP80A uphawu oluphambili ngomsebenzi okhuselekileyo wokukhusela intloko ngentloko ngomsebenzi wokusika we-auto Inkxaso yokuhlaziywa kwe-IAP kwi-Intanethi eyomeleleyo iyahambelana neWindows / JPOS / Linux / Android / Mac / OPOS Inkxaso yokuguqulwa kwe-IP kumacandelo enethiwekhi.
Usuku lweLizwe leRiphabhlikhi yaBantu base China
Umhla wesizwe weRiphabhlikhi yabantu baseTshayina ukwabizwa ngokuba yi "ShiYi", "uSuku lweLizwe", "uSuku lweLizwe", "uSuku lweLizwe lase China" kunye ne "National Day yeVeki yeGolide". URhulumente waBantu abaPhakathi uxela ukuba ukusukela ngo-1949, u-Octob ...
Iphrinta entsha ye-A4 Thermal
ngomphathi ku 21-09-24
Ukusebenza okuphezulu kwe-A4 Thermal Mobile Printer WP-N4 216mm Mobile Printer Model WP-N4 ngumgangatho ophezulu we-A4 oprintayo oshushu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, akukho ribhoni kunye neekhatriji ze-inki, ubunzima bokukhanya. Ixhasa ujongano lwe-USB okanye iBluetooth enesoftware ye-Android inokuprinta amaxwebhu kunye noshicilelo lweelwimi ezininzi, su ...
Umnyhadala Waphakathi Ekwindla (Enye yeeTshayina ezineeMithendeleko yesiNtu)
UMnyhadala ophakathi kweKwindla, okwaziwa njengoMnyhadala weNyanga, usuku lokuzalwa kwenyanga, uEva wenyanga, umthendeleko wasekwindla, uMnyhadala waseMbindini weKwindla, uMnyhadala wokunqula inyanga, uMnyhadala weYueNiang, uMnyhadala weNyanga kunye nomnyhadala wokuhlangana, ongumbhiyozo wesiko phakathi kwabantu baseTshayina. UMnyhadala waMaphakathi eKwindla uvela ...
Ishicilela njani i-thermal?
Umgaqo wesishicileli esishisayo kukugubungela umaleko wefilimu ebonakalayo kwimibala ekhanyayo (ngesiqhelo iphepha) kwaye ujike umboniso ube ngumbala omnyama (ngokubanzi umnyama okanye luhlaza okwesibhakabhaka) emva kokufudumeza kangangexesha elithile. Umfanekiso uveliswa ngokushushu kunye nokusabela kweekhemikhali kwifilimu. Le khemikhali rea ...
Umshicileli weLebhu yeBhakhowudi yeKhompyuter yeLebhu
I-Desktop Thermal Label Printer I-Desktop Thermal Label Printers zezona zilungileyo zokuprinta iilebheli zokuhambisa, iilebhile zezicelo zentengiso, ukulandelela ii-asethi okanye imisebenzi encinci yeelebheli efuna ivolumu ephantsi yoshicilelo. Rhoqo kubhekiswa kuyo njengoshicilelo lweelebheli zokuhambisa, iiprinta zedesktop, prin ...
4 yeePrinta eziPhezulu zeThermal zokuThenga ngo-2021
Ngaba unomdla wokufuna ukwazi ngeyona Printa yeThermal efanelekileyo yokuthenga ngo-2021? Unokuzifumana ngokulula iinkcukacha zabashicileli. Ukuba ufuna ukuprinta iilebheli kunye neerisithi, uya kulufumana olu phononongo luphambili lwabaphrinta luncedo kakhulu ngelixa uthenga. Kwaye kuninzi ekufuneka uyenzile ...
Imbali yomshicileli ikwayimbali yetekhnoloji ephezulu kunye nomzi mveliso. Ukusukela ngeminyaka yee-1970, i-laser, inkjet, ushicilelo lobushushu kunye nobunye ubuchwephesha bokushicilela obungenampembelelo buye bavela kwaye buya bukhula kancinci. Indlela yokurekhoda ye-thermal yentloko yoshicilelo yaqala ukusetyenziswa ngokubanzi kumatshini wefeksi ...
Umshicileli weThermal, Umatshini wokuPrinta weSelfowuni, Irisithi yomshicileli, Isishicileli seThermal ye-Thermal 80mm, Umshicileli oSelfowuni, Umshicileli weRisithi eyi-80mm,